နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: March 2010
စကြဝဠာ ထဲက ဂြိုဟ်ငယ်တစ်လုံးကို
တိတ်တဆိတ် ချစ်မိတဲ့ အကြောင်း
မစားကောင်းတဲ့ အသီးလည်း မဟုတ်ပါပဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တဲ့ အတ္တ တစ်ခုတလေကများ
အတွေးတွေ တိမ်လိုပုံတဲ့ အထဲမှာ
မင်းက ရေခိုးရေငွေ့လို ပါဝင်နေတာတောင်
ငါက ငါ့ကိုယ်ငါ ငြင်းချင်သေးတယ်...။
မင်းကလည်း ရှုံးနိမ့်ခြင်းကို မုန်းတယ်
ငါကလည်း ရှုံးနိမ့်ခြင်းကို မုန်းတယ်
အချစ်အတွက် မရူးသွပ်ဘူး လို့ ပြောထားဖူးတယ်
အချစ်ကို မယုံကြည်ဘူး လို့လည်း ပြောထားဖူးတယ်
စိတ်ကူး ဆိုတာလည်း တကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မြင်နေတုန်းပဲ။
ငါ့ကိုယ်ငါ ဝန်ခံဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်...။
Mario ရဲ့ I don't wanna know ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ကြိုက်တယ်..။ စာသားလေးနဲ့ တွဲနားထောင်တော့ ပိုကောင်းသွားတယ်...။
စာသားကို သေချာ နားမလည်ပေမယ့် သီချင်း ခေါင်းစဉ်လေးလည်း ချစ်စရာကောင်းတာနဲ့ Akon ရဲ့ သီချင်းတွေကိုလည်း အရင်ကတည်းက ကြိုက်တာမို့ ဒီသီချင်းလေးကိုလည်း ကြိုက်သွားတာ..။
ဒီသီချင်းလေးကို လည်း ကြိုက်တယ်..။ Jesse Mccartney လေးကိုလည်း ချစ်စရာကောင်းလို့ သဘောကျတယ်...။ သူ့သီချင်းလေးတွေ တော်တော်များများကလည်း အေးအေးလေးတွေနဲ့ နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။
ဒီ link က MTV မို့ သီချင်းလေးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သရုပ်ဖော်လေးမို့ ပိုကြည့်ကောင်းပေမယ့် embed လုပ်လို့မရလို့ပါ။
(တကယ်တော့ စာမရေးဖြစ်လို့ သီချင်းတွေ တင်နေတာ... :D)
2 comments Labels: သီချင်း
Carrie Underwood ရဲ့ သီချင်းလေးပါ။ နည်းနည်းတော့ အေးတယ်..။ ဒါပေမယ့် စာသားလေးကို သဘောကျမိလို့ တင်လိုက်တာပါ။ အားလုံးဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် Temporary home မှာ နေနေရတာပဲလေ..။ ဘဝ ဆိုတာ ခဏတာ နားခိုရတဲ့ အိမ်ပဲ မဟုတ်လား...။
how he likes this place
She needsalittle help got nowhere to go.
At night she whispers
to her baby girl:
Someday we'll find a
place here in this world
6 comments Labels: သီချင်း
ချော က အတွေးတွေ အကြောင်း ရေးခိုင်းလို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ တွေးတာတွေက များလွန်းလို့ ဘာရေးရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ အတွေး ဆိုတာကလည်း တစ်စက္ကန့်မှာကို အများကြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာ မဟုတ်လား...။ လောလောဆယ်တော့ လုပ်စရာ ရှိတဲ့ Project အကြောင်းပဲ စဉ်းစားနေမိလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိပါဘူး။ ကိုယ်က ဒီလိုပဲ Thesis တုန်းကလည်း ခေါင်းစဉ် မသေချာမချင်း အဲဒီအကြောင်းပဲ စဉ်းစားနေမိတာ.. လမ်းသွားတုန်းရော.. အိပ်ကာနီးရော.. Toilet ဝင်ချိန်တောင် စဉ်းစားးနေတတ်သေးတာ...။ တစ်ခါတလေ ဝတ္တုဇာတ်လမ်း ဆက်မရေးတတ်တော့ရင်လည်း ဒီလိုပဲ နေရာမရွေး တွေးနေတတ်တာ..။ ဦးနှောက်ထဲမှာ တွေးလိုက်တာနဲ့ စာနဲ့ရေးပြီးသား ဖြစ်သွားရင် ကောင်းမှာပဲလို့တောင် တွေးမိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း တွေ ဟိုရောက်ဒီရောက် တွေးတာတွေတော့ အများကြီးပေမယ့် စာအနေနဲ့တော့ အကုန် မရေးဖြစ်ပါဘူး။ အချိန်ကုန် အကျိုးမရှိမှန်း သိပေမယ့် ဝါသနာပါနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တတ်တာကလည်း အားတဲ့ အချိန်တစ်ချို့ကို ယူနေပြန်ပါရော..။
ကိုယ် တွေးပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်တဲ့ အထဲမှာ တစ်ခါတလေ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေတောင် အလွတ်မပေးတတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုမှ မတွေ့နိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကို စိတ်ကူးထဲမှာ တွေ့ပေးပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ချင် ဆင်တတ်သေးတာ..။ ရည်းစားမရှိသေးတဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ တစ်ခါတလေလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ကူးထဲမှာ ပုံပြင်ထဲက မင်းသားလေးလို လူမျိုးနဲ့ တွေ့ပေးတတ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တွေးနေတုန်းမှာပဲ မင်းသမီးနေရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထားရတာ မကြိုက်တော့ပဲ စိတ်ကူးထဲက မင်းသမီး ဖြစ်သွားပြန်ရော..။ ဘာလို့ဆို ကိုယ်သာ ယောက်ျားလေးဆိုလည်း ကိုယ်လိုလူမျိုးကို မကြိုက်လို့ပဲလေ..။ ဘာရယ်မဟုတ် ဟိုရောက် ဒီရောက် အစမရှိ အဆုံးမရှိ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း တစ်ခါတလေ တွေးနေမိတာပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း အပြင်မှာသာ မတွေ့တာ... စိတ်ကူးထဲမှာတော့ တွေ့ဖြစ်နေပါတယ်။
တွေးတဲ့ နေရာမှာတော့ ကိုယ်က အိပ်မက်ထဲမှာကို တွေးနေတတ်တဲ့လူပါ။ ကိုယ်က သူများလို သိပ်အိပ်မက် မမက်တတ်ဘူး။ မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေလည်း သိပ်မမှတ်မိတတ်ပါဘူး။ တစ်ညတလေ မက်တတ်တဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာတောင် ဝတ္တုဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းတွေ ပါသေးတယ်။ ညဘက်ကြည့်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း မစွဲလမ်း မပတ်သက်ပါပဲ မက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက အဲဒီအိပ်မက်တွေကို သေချာ မမှတ်မိတော့ပဲ ဇာတ်သိမ်းလောက်သာ မှတ်မိတတ်တာပါ။
စိတ်ကူးထဲမှာတော့ အရာရာကို လှလှပပ တွေးလို့ရပါတယ်...။ အဲဒါကြောင့်လည်း စိတ်ကူးယဉ် ဝတ္တုတွေမှာ ပျော်စရာ ဇာတ်သိမ်းတွေ ရှိကြတာပေါ့။ ဖြစ်ရပ်မှန်တိုင်းကတော့ မလှပကြဘူးလေ။ စိတ်ကူးထဲမှာတော့ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာမကြီး လည်း ဖြစ်လို့ရတယ်။ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာကြီးလည်း ဖြစ်လို့ရတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ စတိုင်ကျကျ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းနာ လည်း ဖြစ်လို့ရတယ်လေ…။
ကိုယ် ငယ်ငယ်ကဆို အလွမ်းဝတ္တုတွေ မဖတ်ဘူး။ အမေတွေ အဒေါ်တွေ ဖတ်တဲ့ မောင်စိန်ဝင်းတို့ ငြိမ်းကျော် တို့ဆို အလွမ်းများလို့ မကြိုက်ဘူး။ ခုထိလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ရသပိုင်းမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ဝတ္တုတွေ လောက်သာ ဖတ်တာ။ အပျော်ဖတ်ဆိုရင်တော့ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဇာတ်သိမ်းပဲကြိုက်တယ်..။ အပျော်ဖတ်ဝတ္တုတွေ အရောင်းသွက်နေတာလည်း ဒါကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်။ ဘဝအမောတွေထဲက ပြေးချင်လို့မှ ဖတ်တာဆိုတော့ တစ်ချို့အပျင်းပြေ ဖတ်တဲ့ လူတွေကလည်း ဘဝသရုပ်ဖော်တွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ သိပ်မကြိုက်ကြတာ ဖြစ်မှာပေါ့လေ…။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်က စဖတ်တာ စုံထောက်ဝတ္တုတွေပါ။ အောင်ဇင်တို့၊ မြတ်ထွန်းသစ်တို့၊ မင်းသိင်္ခတို့ကို အဒေါ်က အဖတ်များတာ။ ဆရာမကြီး ကလျာ ရဲ့ ဝတ္တုတွေ လည်း ပါသေးတယ်။ ဘာသာပြန်တွေ ဆိုလည်း အမေ့ရဲ့ တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်မှာ ရှိတာတွေ အကုန်လောက်နီးနီးပဲ… အဒေါ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဖတ်ကြတာလေ…။
ငယ်ငယ်က ဂျူးရဲ့ ဝတ္တုတွေတောင် သိပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ မရှိမဖြစ်မိုး ကျမှ စကြိုက်တာ…။ ကြေမွသွားသော တိမ်တိုက်များ ကိုတော့ ၇ တန်းတုန်းက အတန်းထဲမှာ ဆရာ မလာတဲ့ အချိန်လည်း ရှိနေတာနဲ့ ဖတ်တာ နှစ်အုပ်လုံး ပြီးသွားတာပဲ။ ခုတော့ ဂျူးကို တကယ်ကြိုက်တယ်။ သူ့ဝတ္တုတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို သဘောကျတာ မကျတာထက် ရေးသမျှ ဝတ္တုတိုင်း အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်အနေနဲ့… နောက်ပြီး ခုချိန်ထိလည်း အပျိုကြီးဘဝမှာ လှလှပပ ရပ်တည်နေနိုင်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပိုပြီး လေးစား အားကျ ပါတယ်။
စာရေးဆရာထဲက နောက်ထပ် ကိုယ်လေးစားအားကျတဲ့သူတွေက A.J. Cronin နဲ့ Robin Cook ပါ။ A.J. Cronin ဆရာဝန်အလုပ်က အနားယူပြီးတဲ့ အချိန်မှ စာပေလောကကို ဝင်လာတာတောင် အများကြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူမို့ လေးစားမိတာပါ။ သူ့ရဲ့ စာအုပ်တွေ အားလုံးကို ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်လည်း နောင်တစ်ချိန် ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ အိပ်မက်တွေကို မစွန့်လွှတ်ဖို့ တွန်းအားပေးနေသလိုပဲ။ Robin Cook ကလည်း ဆရာဝန် စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ပါပဲ။ သူ့ဝတ္တုတွေကတော့ ဆရာဝန် အတွေ့အကြုံတွေ အခြေခံတဲ့ စုံထောက် အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေပါ။ လောလောဆယ် မှတ်မိနေတာကတော့ COMA ဆိုတဲ့ ဝတ္တုပါ။ စာရေးခြင်းသက်သက်နဲ့ အသက်မွေးတဲ့ စာရေးဆရာ စစ်စစ်တွေထက် ကိုယ်က အဲလို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာရပ်ကိုလည်း ထူးထူးချွန်ချွန် ရပ်တည်ရင်းနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာ ဖြစ်လာသူတွေကို ပို လေးစားအားကျမိပါတယ်။ နောက်ထပ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာတွေတော့ အများကြီး ရှိသေးတာပေါ့။
နောက်ထပ် အားကျမိတဲ့သူက အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ မီမီလီဒါပါ။ အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ ပေမယ့် drama ကားတွေရိုက်တာ မဟုတ်ပဲ Deep Impact တို့ Peacemaker တို့လို ကားမျိုးတွေ ရိုက်တာပါ။ ၂၀၀၉ မှာလည်း Antonio Banderas၊ Morgan Freeman တို့နဲ့ Thick as Thieves ကို ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ခေတ်မီ အက်ရှင်ကားတွေ science fiction တွေ ရိုက်နိုင်ဖို့က အဝေးကြီးလိုနေပါသေးတယ်။ (ကိုယ့်ကို သိန်း နှစ်ထောင် သုံးထောင်လောက် ထုတ်ပေးမယ့် ပရိုဂျူဆာ ရှိရင်တော့ ပီပြင်အောင် ရိုက်ပြမယ်လေ :D)။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ညီမငယ်တွေကတော့ ကိုယ် ဒါရိုက်တာ လုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမှာ မင်းသမီး မလုပ်ချင်ဘူးဆိုပဲ။ တောထဲတောင်ထဲတွေ.. ပြေးလွှား လှုပ်ရှားရတဲ့ ကားတွေ ရိုက်မှာမှန်း ကြိုသိနေကြတယ်လေ…။ နောက်ဆုံးခန်းမှာတော့ မင်းသားနဲ့ ကြည်နူးတဲ့ အခန်း ပါစေရမယ်လို့ သူတို့ကို ပြောရတယ်.. ဟားဟား..။ Computer Special Effects တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားပေမယ့်လည်း အချိန်မပေးနိုင်တာရယ်.. သင်တန်းကြေးတွေကလည်း ဈေးကြီးပြီး တကယ်တတ်အောင် သင်နိုင်တဲ့ သင်တန်းလည်း သိပ်မရှိတာကြောင့် ခုချိန်ထိ မတက်ဖြစ်သေးဘူး။ (မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ ကာတွန်းကားတွေထဲက ကွန်ပျူတာနဲ့ ရေးတဲ့ ကာတွန်းရုပ်တွေကလည်း တော်တော်ကို အရုပ်ဆိုးတယ်လေ :D)
ကိုယ်က အဲလိုပဲ ဟိုဟိုဒီဒီ အတွေးများတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိလို့ တကယ် အာရုံစိုက်ရမယ့် ပညာရေးဘက်မှာလည်း မထူးချွန်ခဲ့ပါဘူး။ အားတဲ့အချိန် ရုပ်ရှင်လေးကြည့်လိုက် ဝတ္တုလေး ဖတ်လိုက် လုပ်နေမှတော့ ပညာရေးမှာ ဘယ် ထိပ်ဆုံး ရောက်နိုင်ပါတော့မလဲ။ ကိုယ့်မိဘတွေကတော့ ဖြစ်စေချင်ရှာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ ဆင်ခြေပေးစရာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က မှတ်ဥာဏ်မကောင်းဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲပြောတတ်တယ်။ စာကျက်ရတဲ့ အချိန် အာရုံများရင်လည်း ကျက်မရဘူး။ ဘာသံမှ မကြား၊ လူတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့ နေရာမှာကျက်မှ ကိုယ်က စာရလွယ်တာလေ.. :D ။ အဲဒါကြောင့် စာတွေ ပြန်ကျက်ရမယ့် ကလေး ဘဝတော့ ပြန်မရောက်ချင်တော့ဘူး။
တစ်လောက Movie5က နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင် တစ်ကား ကြည့်လိုက်ရတယ်။ ပြေတီဦးနဲ့ မြန်မာမှုပြုပြီး ရိုက်ထားတာလည်း အိမ်ပြန်တဲ့ ကားပေါ်မှာ ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၃ နှစ် အရွယ်ကလေးက လူကြီး ဖြစ်ချင်လို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့ တကယ်ဖြစ်သွားပြီး ကစားစရာ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း မင်းသမီး နဲ့ တွေ့ပါတယ်။ နောက်တော့ လူကြီးတွေရဲ့ မဖြူစင်မှုတွေ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လှည့်ဖျား ညစ်ပတ်မှုတွေကြောင့် ကလေး ပြန်ဖြစ်ချင်ပြီး ပထမ ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ နေရာပြန်သွားပြီး ကလေးအဖြစ် ပြန်ရောက်အောင် ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ ကားပါ။ ကလေး အဖြစ် ဆုတောင်းအပြီးမှာပဲ မင်းသမီးက လိုက်လာတော့ သူက ဆုတောင်းပြီးသွားကြောင်း ပြောပြီး မင်းသမီးကိုပါ သူ့လို ဖြစ်အောင် ဆုတောင်းလိုက်ပါလား လို့ ပြောတော့ မင်းသမီးက သူ ကလေးဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ ဖူးပြီမို့ ပြန်မရောက်ချင်တော့ပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြတော့ ဘယ်သူမှ ကလေးဘဝ ပြန်မရောက်ချင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ရွေးရမယ့် ဘဝ တစ်ဆစ်ချိုးမယ့် အချိန်ကိုတော့ ပြန်ရောက်ချင်ပါတယ်။ ခုနေ အဲဒီ အရွယ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ လက်ရှိအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်ချင်မှ လုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ဘွဲ့လွန်ကို တစ်ခြားနိုင်ငံမှာ တက်ဖို့ ကြိုးစားချင် ကြိုးစားမိလိမ့်မယ်လေ။ ခုနေ စိတ်ကူးကတော့ အရင်နဲ့ မတူမှာ သေချာပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုလည်း လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ စိတ်ညစ်ညူးနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ…။ မိဘ မိသားစုရဲ့ နောင်ရေးကို စဉ်းစားရင်သာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာ မှန်ရဲ့လားလို့ စဉ်းစားမိတာပါ။ ဘယ်မှာနေနေလည်း ကိုယ်က တွေ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်အောင်နေပြီး ဘဝကို ပျော်ပျော်ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့သူပါ။ ဘယ်သူမှ မရှိလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် အားတဲ့အခါ တွေးချင်တာတွေး ရေးချင်တာရေး… ရုပ်ရှင်လေး ကြည့်ချင်တဲ့ အခါကြည့်လိုက်၊ စာအုပ်လေး ဖတ်တဲ့ အခါ ဖတ်လိုက်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာသလို နေနေတဲ့သူပါ။ ကိုယ်က တစ်ခါတလေ စိတ်လေနေရင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများလာရင်လည်း အဲလိုပဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ စာအုပ်ဖတ်ပြီး မေ့အောင်လုပ်လိုက်တယ်လေ။
ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတဲ့အတိုင်း ရေးတာတွေက ဟိုရောက်ဒီရောက် ဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ ချော ရဲ့ Tag အကြွေးကို ဆပ်တာပါနော်…။ လာဖတ်တဲ့ သူ အပေါင်းကို အားနာပါတယ်.. :P ။
16 comments Labels: Tag Post, ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း
သစ်တောအုပ်တွေကို ဖြတ်လာတဲ့ မီး ပေါ့
သဘာဝရဲ့ အလှအပတွေကို လောင်ကျွမ်းလို့...၊
တစ်နေရာက တစ်နေရာ ခုန်ကူးရင်း
တဖျစ်ဖျစ် တဖြောက်ဖြောက် အသံတွေနဲ့
သစ်ရွက်တွေ... ထင်ရှူးပင်မြင့်တွေနဲ့ ကစားရင်း
အန္တရာယ်အတွက် အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေး
တောရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ပျော်ခဲ့တဲ့
ငရဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ည...။
ပစ္စည်း တစ်ဖက်၊ ကလေး တစ်ဖက် နဲ့
အဲဒီ မီး.. အလည်လာမှာကြောက်လို့
လွတ်ရာ သွားဖို့ ပြင်ကြပေါ့...။
ဟိုဝေးဝေးမြို့က မီးသတ်ကား တစ်စီး
Ref: Forest Fire by George E. Thompson
The Forest Fire by John Stone
(အပေါ်ကပုံတွေက မြို့သစ်မှာ တောမီးလောင်တုန်း ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါ)
ဓါတ်တော်ချိုင့် သို့ တစ်ခေါက်
ကိုယ်တို့ ဓါတ်တော်ချိုင့် ကို သွားချင်နေတာ ကြာပါပြီ။ အိမ်ပြန်နေကြတာနဲ့၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်နေကြတာနဲ့ လူမစုံ ဖြစ်ပြီး မသွားဖြစ်တာပါ။ တစ်ခါ သွားမယ်လို့ စီစဉ်လိုက်ပြန်တော့လည်း ဓါတ်တော်ချိုင့် မှာ လူငါးယောက် ပျောက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်လာလို့ တစ်ချို့ ကမသွားရဲတော့တာနဲ့ အစီအစဉ်ပျက်သွားပြန်ပါတယ်..။ ကောလဟာလ သတင်းဆို တော်ရုံနဲ့ မယုံကြည်တတ်တဲ့ ကိုယ်လည်း ပြင်ဦးလွင် ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးကြည့်တော့ သူတို့က လုံးဝ မသိပါဘူးလို့ ပြောတော့ ကိုယ်တို့လည်း ကောလဟာလ သက်သက်ပဲလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။ သွားတော့ မသွားဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီတစ်ပတ် စနေတော့ တကယ် သွားဖြစ်သွားပါတယ်။
လမ်းပြ အဒေါ်ကြီး ပြောပြမှ အရင်က ကောလဟာလရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို သိခဲ့ရပါတယ်။ လူ ခုနစ်ယောက် လာခဲ့ပြီး ငါးယောက် တကယ် သေခဲ့တာပါ။ သတင်းကြားသလို ဘာမှန်းမသိ ပျောက်သွားတာတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီမှာ ဘာမှမဆိုင်ပဲ ကိုယ်က Jaws ဇာတ်ကားတွေထဲက တာဝန်ရှိသူတွေက ခရီးသွားတွေ မလာမှာစိုးလို့ အန္တရယ်ရှိတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးထားတာကို သွားသတိရမိပါတယ်။
အဲဒီခရီးသွား အဖွဲ့မှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ယောက်ျားလေး ခြောက်ယောက်ပါပါတယ်။ သူတို့က စားဖို့ သောက်ဖို့ သယ်လာကြတဲ့အထဲမှာ အမဲသားတွေတောင် ပါလာခဲ့ပါတယ်။ သောက်စရာတွေလည်း ပါတာပေါ့။ မိန်းကလေး နဲ့ ယောက်ျားလေး အတွဲကလည်း အမှားအယွင်း ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီတောတောင်က အဲဒါမျိုးတွေ မကြိုက်ပါဘူး တဲ့။ သူတို့ အဖွဲ့က လမ်းပြလည်း မခေါ်ပဲ ကိုယ့်ဟာကို လျှောက်သွားရင်း လမ်းမှားသွားခဲ့တာပါ။ လျှိုထဲ ရောက်ပြီး ပဒူအုံ နဲ့ တိုးသွားပါတယ်။ သူတို့က လောက်လေးနဲ့ သွားပစ်တာလို့လည်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ပဒူတွေ ဝိုင်းတုတ်ပြီး တစ်ချို့လည်း ချောက်ထဲခုန်ချပြီး ခေါင်းနဲ့ ခိုက်မိသွားပါတယ်။ မပြေးနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ မျက်နှာ နဲ့ ခေါင်းတွေမှာ အတုပ်ခံရပြီး အခြေအနေဆိုးခဲ့ပါတယ်။ လမ်းပြတွေပဲ သူတို့ကို ရှာဖွေပြီး ဓါတ်တော်ချိုင် အပေါက်ဝကို သယ်လာ၊ ချထားတာပါ။ ဆေးရုံခေါ်သွားဖို့ စောင့်နေတုန်းမှာပဲ မိန်းကလေးကတော့ ဆုံးသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ခေါင်းက ဆံပင်တွေထဲမှာကို ပဒူကောင်တွေပါလာပြီး ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပဒူကောင်တွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ အသားစတွေ ပါလာတာ တွေ့ ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတော့ အကြာကြီး ရှာမတွေ့ ပဲ ဖြစ်နေတာ တကယ်တော့ သူက ပဒူကောင်ရန်က ပြေးရင်းနဲ့ ရေတံခွန်နားရောက်သွားပြီး ခုန်ချလို့ နစ်သေရတာပါ။ ဆေးရုံရောက်တာလည်း တကယ်တော့ အချိန်မကြာခဲ့ပါဘူး။ အချိန်မီနိုင်ပါရဲ့ နဲ့ သေသွားကြတာ တောထဲမှာ မယူသင့်တဲ့ အသားတွေယူလာ၊ မလုပ်သင့် မပြောသင့်တာတွေ လုပ်လို့ ပြောလို့ ဖြစ်ရတာလို့ လမ်းပြအဒေါ်ကြီးကတော့ ပြောတာပဲ။ ဆေးရုံရောက်ပြီး အသက်ရှင်သွားတဲ့ နှစ်ယောက်ကတော့ အိမ်ထောင်သည်တွေ ဖြစ်ပြီး အရက်လည်း မသောက်ခဲ့ဘူး လို့ ပြောပါတယ်။
အဆင်းတုန်းကတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပြီး ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ သွားခဲ့ကြတာ.. အတက်ကြတော့မှ တကယ့်ကို စကားတောင် မပြောနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ကတော့ နောက်ဆုံးပဲ.. :D ကိုယ့်နောက်မှာ တစ်ယောက်ပဲ ကျန်တယ်။ ပင်ပန်းလွန်းလို့ နောက်တစ်ခေါက်သွားဖို့ တော့ တော်တော် စဉ်းစားရပါဦးမယ်။
ရေတံခွန်ကတော့ နွေဦးရောက်တော့မှာဆိုတော့ ရေသိပ်မများတော့ပဲ ကျောက်တုံးတွေ ပေါ်လောက်အောင် နည်းနေပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်လက်စွမ်းပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်လိုက်ပါတယ်။
22 comments Labels: ခရီး, ကြည့်စရာ, ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း
မီးသတ်ဌာနမှ ရောက်လာချိန်တွင် မီးခိုးလုံးများက ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းနေပြီ။ ကားကတော့ အလျှံတငြီးငြီး တောက်လောင်နေပြီ။ မြေပြင်ပေါ်ကိုပါ မီးအစအန များက ကျနေဆဲ။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ကယ်ဆယ်ရေးက မီးကျွမ်းနေသော ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုကို ဆွဲထုတ် ပြီး ကားပိုင်ရှင်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အသက် ၂၀ အရွယ် လူငယ်ကလေး ဖြစ်သည်။ သူ့အမေကတော့ ဖြေမဆည်နိုင်အောင် ဝမ်းနည်းနေသည့်ကြားက သတင်းသမားများ မေးသမျှကို ဖြေပေးနေရသေးသည်။ ထိုညက ကောင်လေး၏ အမေထံသို့ ကောင်လေး၏ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းဆိုသော မိန်းကလေး တစ်ယောက် ဖုန်းဆက်သည်။ သူ့အမေက သတင်းသမားများကို ပြောစဉ်က သူ့မှာ သူငယ်ချင်းမရှိဘူး ဟု ဘာဖြစ်လို့ ပြောခဲ့ရသလဲ လို့ မိန်းကလေးက စိတ်ဆိုးသော အသံနှင့် အပြစ်တင်သည်။ ဘာကြောင့်ပြောရလဲ ဆို သူကလည်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီထဲမှာ မပါစေချင်ဘူး ထင်လို့ပါ လို့ သူ့အမေက ပြောလိုက်ရသည်။ “သူမသေသေးဘူးလို့ပဲ ကျွန်မ စိတ်ထဲ ထင်နေတယ်..” မိန်းကလေးက ပြောသည်။
မိုင် ၂၀ အဝေးမှာတော့ ကားကြုံစီးချင်သူ တစ်ယောက်သည် မီးဟပ်ထားသော လက်များနှင့် ဖြတ်သွားသော ကားတစ်စီးကို တားသော်လည်း ရပ်မပေးခဲ့ပါ။ သူ့ဘဝ တစ်ခုလုံးကို ထားခဲ့ရပြီဟု သူ စတင် တွေးတောမိသည်။ သူ့မျက်နှာတွင် အပြုံးလေး တစ်ခု ပေါ်လာပြီး လမ်းဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ ထရပ်ကားတွေ ရပ်ကြသော ဆိုင်ကလေး တစ်ခု တစ်လေ တွေ့လျှင်တော့ သူ့မှာရှိသော ပိုက်ဆံအနည်းငယ်နှင့် ကော်ဖီလေး ဘာလေး သောက်ပြီး နောက်မြို့ကို သွားဖို့ စီးစရာတစ်ခုခုလည်း ရှာလို့ ရနိုင်သည်။ သူ ဘယ်နေရာကို သွားရမယ်မှန်း မသိသေး..။ ဒီလမ်းမကြီးကပဲ သူ့အိမ် လို့ စဉ်းစားမိသည်။ သူ အရင်က အိမ်လို့ ခေါ်ခဲ့သော နေရာကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မသွားနိုင်တော့။
သူနေသော အမေရိကန်ပြည်နယ်လေးမှာ ရဲမှူး နှင့် သူ့လူတွေ အားလုံးက မူးယစ်ဆေး အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းတွေနှင့် ပတ်သက်ကြသည်။ သူက ဆေးရောင်းသူများကို စုံစမ်းဖူးသည့်အတွက် သူတို့က သူတို့ လုပ်သမျှကို ဖုံးကွယ်ရန် အတွက် သူ့နောက်ကို လိုက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ထိုလုပ်ငန်းမှ ငွေအမြောက်အမြား ရနေသဖြင့် ရဲမှူး ရာထူး အရွေးခံရဖို့ အတွက်လည်း ထိုငွေများကို သုံးခဲ့သည် ထင်၏။ မီးလောင်နေသော ကားပေါ်က ရဲကတော့ ကျည်ဆံ တစ်ဆံ ခေါင်းထဲဝင်လျက် ကျန်ခဲ့ပြီ။
ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်ကလူမှာ အညိုရောင် ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးပါသည်။ အိတ်ထဲမှာ အဝတ်အနည်းငယ်နှင့် ရဲသားကိုင် ပစ္စတိုတစ်လက် ပါသည်။ သွေးစွန်းနေသော ရဲယူနီဖောင်းကို ဝတ်ထားသည်။။ ထိုရဲရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က ဒေါ်လာ သုံးထောင် တွေ့ခဲ့သည်။
ယာဉ်ရပ်နားရာ ဆိုင်ကလေးက ဖွင့်နေသဖြင့် သူ ဝင်သွားပြီး ကော်ဖီမှာလိုက်သည်။ သူသတ်ခဲ့သေိာုရဲမှူးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှာ မပါသေးသဖြင့် ဘယ်သူမှ သူ့ကို ဂရုမစိုက်ကြပါ။ ကော်ဖီဖိုးရှင်းပြီးနောက် လမ်းကြုံလိုက်လို့ရမည့် ထရပ်ကား တစ်စင်းကို တွေ့ခဲ့သည်။ သူ ထရပ်ကားပေါ် တက်ပြီးနောက် ထွက်လာခဲ့ကြသည်။
နောက် ငါးနာရီလောက်ကြာပြီးတော့ သူ့အောက်ဘက်မှ ကားဘီး ပွတ်တိုက်သံ ကြားလိုက်ရသည်။ ကားရပ်နားရာဆိုင်တစ်ခုမှာ ဒီညအတွက် ရပ်ထားတော့မည် ဖြစ်သည်။ သူ ဘယ်နေရာ သွားရမည်ကို သူ့ဟာသူ ရှာရတော့မည်။
မိုင်တစ်ရာကျော် အဝေးကို သူရောက်နေခဲ့ပြီ။ ထိုအချက်က သူ့ကို ဝမ်းမြောက်စေသည်။ သူမြို့ထဲသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ မြို့ထဲမှာ အိပ်စရာ နေရာ တစ်ခုလောက် ရှာရမည်။ ဒီယူနီဖောင်းကိုလည်း ချွတ်ပြီး ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရမည်။
ထိုအချိန်မှာပင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အော်လိုက်သော အသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ အသံလာရာကို ကြည့်လိုက်တော့ လူတစ်ယောက်က အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ကို ချုပ်ကိုင်ရင်း သစ်ပင် ပင်စည်မှာ ကပ်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူမ ပါးစပ်ကို အတင်းပိတ်ထားပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ကို လုယူဖို့ ကြိုးစားနေသည်။ ထိုလူ လုပ်နေသည် ကောင်းတာတော့ ဟုတ်ပုံမရပါ။ သူ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှ သေနတ်နှင့် သူ့ယူနီဖောင်းမှ ခွာထားသော ရဲတံဆိပ်ကို ထုတ်ယူပြီး ထိုနေရာသို့ ချဉ်းကပ်သွားလိုက်သည်။
ထိုလူက သေနတ်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး ပြေးဖို့ပြင်သည်။ သို့သော် ကြောက်ပြီး သူ့ခြေထောက်များက မပြေးနိုင်သလို ဖြစ်နေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ချခဲ့ပြီး ပြေးသွားသည်။
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..၊ ကျွန်မ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ ရဲိုရဲမှူးတစ်ယောက် ရောက်လာတာကို တွေ့ရတာ ဒါ ပထမဆုံးပဲ”
“ငါတော့ မင်းကို စိတ်ပျက်အောင် လုပ်မိပြီ ထင်တယ်၊ ငါက ရဲိုရဲမှူး တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး” ကားကြုံစီးသူက သူ့မူပိုင်အပြုံးကို ပြုံးရင်း ပြောသည်။
“ဒါဆို ရဲတံဆိပ်က ဘယ်က ရလာတာလဲ”
“ငါက ရဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ပဲ ထားပါတော့၊ ငါနာမည် ဒန် ပါ”
သူမက ကျောပိုးအိတ်ကို သတိထားမိသွားပြီး သူ့ကို အိမ်ခြေရာမဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ်မှန်း တွေးမိသွားသည်။ သူမက နောက်ဆုတ်သွားပြီးမှ ဒန်ရဲ့ ဘယ်လက်မှာ ကိုင်ထားဆဲ ဖြစ်သော သေနတ်ကို ကြည့်နေသည်။ ဒန်ကလည်း သူမကြည့်နေမှန်း သိသွားပြီး သေနတ်ကို အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်သည်။ သူပြန်ကြည့်လိုက်တော့ သူမက သူ့ကို ကြောက်နေဆဲ ပုံစံနှင့်။ သူက မိန်းကလေးကို ပြုံးပြပြီး “ဂွတ်နိုက်” ဟု နှုတ်ဆက်ကာ လမ်းဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ လမ်းတစ်ဘက် ရောက်တော့ လမ်းသရဲ တစ်သိုက်က သူ့ကို ကြည့်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ဟေ့ ကောင်ကလေး၊ ငါတို့ မင်းကို ဒီနားမှာ တွေ့ရတာ သဘောမကျဘူးကွာ”
ခရမ်းရောင် ဆံပင်နှင့် လူက သူသုံးနေကျ ဖြစ်ဟန်တူသော ငါးပေ လောက်ရှိသော ချိန်းကြိုး တစ်ခုကို ကိုင်ကာ ပြောသည်။ တစ်ခြား သုံးယောက်က တုတ်လို အရာများ ကိုင်ထားကြသည်။ သူတို့အတွက် လုပ်နေကျ ဖြစ်ပုံရသည်။ မတိုက်ခိုက်ပဲနှင့် ထိုနေရာမှ ထွက်သွားလို့ ရနိုင်မည် မဟုတ်မှန်း သူသိလိုက်သည်။ သူတို့ဘယ်လောက်များများ၊ ဘယ်လောက် အတိုက်အခိုက် ကောင်းကောင်း သေနတ်ကိုတော့ ယှဉ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်မှာပင် သူ့နောက်မှ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ ခုဏက သူကယ်ခဲ့သော မိန်းကလေးပင် ဖြစ်သည်။ “ရမ်ဒီ၊ သူက လူကောင်းပါ၊ ကျွန်မကို ကယ်ခဲ့တာပါ”
ရမ်ဒီ ဟုခေါ်သော ခရမ်းရောင်ဆံပင်နှင့်လူ အမူအယာပြောင်းသွားသည်။ “မင်းက ငါ့ညီမကို ကယ်ခဲ့တယ်ပေါ့၊ ကောင်းပြီလေ အဲတော့လည်း မင်းကို သွားခွင့်ပြုရမှာပေါ့”
အဲဒီနောက် ဒန်က သူ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှ သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး ရမ်ဒီကို ချိန်ထားလိုက်သည်။ ရမ်ဒီက ရုတ်တရက်မို့ ငုံရှောင်လိုက်မိသည်။ သို့သော် ဒန်က ထိုသေနတ်နှင့် ရမ်ဒီ နောက်က လာနေသော ရဲ ကို ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒန်သည် အခြား ရဲတစ်ယောက်၏ အလောင်းရှေ့တွင် ရပ်နေမိပြန်ပြီ။ ပစ်ချက်က အရင်လိုပင် ရဲ၏ ဦးခေါင်းထဲ ဝင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်း အရင်လိုပင် လဲကျလာသည်။
ရမ်ဒီက သေနေသော ရဲကို ကြည့်ပြီး တစ်ခွန်းသာ ပြောသည်။ “Shit”
“လာ ကိုယ့်လူ၊ မင်း ငါတို့နောက် လိုက်ခဲ့တာ ကောင်းလိမ့်မယ်.. သူတို့ မင်းကို မရှာနိုင်မယ့် နေရာ ဆို့လို့ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်၊ မြေအောက်ကမ္ဘာပဲ” ရမ်ဒီက သူ့ကို ပြောသည်။
“ဘာလို့လဲ” ဒန်က ရမ်ဒီကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး မေးသည်။ သူ့လက်ထဲမှာလည်း လူသတ်လက်နက်ကို ကိုင်ထားလျက်….။
“အဲလို မလုပ်ရင် မင်းကို ရဲတွေ မိသွားမှာပေါ့ကွ၊ အဲဒါကြောင့်ပဲ”
ရမ်ဒီ ၏ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ကြောက်ရွံ တုန်လှုပ်နေပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့
“သူ့ကို မြေအောက် ခေါ်သွားဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲ၊ သူက အဖွဲ့ဝင်လည်း မဟုတ်ဘူး နောက်ပြီး ငါတို့ သူ့အကြောင်းလည်း ဘာမှ မသိဘူး” ဟုပြောသည်။
“သူက ရဲတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ငါ့ညီမ လိုရီ ကိုလည်း ကူညီခဲ့တယ်၊ အဲတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောရမှာပဲ”
ရမ်ဒီက သူတို့ မျက်လုံးထဲ စိုက်ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်သည်။
သူတို့ မြေအောက်ကို ရောက်သောအခါ အစောင့်တွေက ဒန်ကို တားသော်လည်း ရမ်ဒီကြောင့် ဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ထိုနေရာမှာ ဟဲဗီး မက်တယ် နှင့် ရက်ပ် အဆိုတော် အဖွဲ့ များ၏ ပိုစတာများ ကပ်ထားသည်။ သီချင်း တစ်ပုဒ်ကိုလည်း ဖွင့်ထားသေးသည်။ သီချင်းက ကလို့ကောင်းမည့် သီချင်း။ လိုရီက ဒန်၏ လက်မောင်းကို ဆွဲခေါ်သွားပြီး ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်မည့် အခြမ်းက အခန်းတစ်ခန်းသို့ ဦးဆောင်ပြီး ခေါ်သွားသည်။ လိုရီ ၏ ဆံပင် ပျော့ပျော့များက ပုခုံးပေါ် ဖြာကျနေသည်။ သူမ နှုတ်ခမ်းများမှာ အပြုံးလေး တစ်ခု…။ ဒန် ရဲ့ မျက်နှာကတော့ သူ့ပုံစံ အတိုင်း အေးစက်စက် မာကြောကြော…။ သူမက မော့၍ ဒန့် မျက်နှာ ရှေ့သို့ တိုးလာပြီး ငြင်ငြင်သာသာ ပြောသည်။ “ပန်းခြံထဲက ကိစ္စ အတွက် ရှင့်ကို ကျေးဇူးတင်ချင်တာပါ”
သူမက ရှေ့တိုးလာပြီး ဒန့်ကို နမ်းလိုက်သည်။ ရမ်ဒီ လျှောက်လာတော့ သူမြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းအတွက် အံအားသင့်တုန်လှုပ်သွားသည်။
“အိုး ရမ်ဒီ၊ ကျွန်မ သူ့ကို ကျွန်မတို့ထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမလို့ပါ”
“နင် သိပါတယ် လိုရီ၊ သူတို့ ဆန္ဒရှိမှပဲ ငါတို့ထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာလေ”
“နေကြစမ်းပါဦး၊ ခင်ဗျားတို့ ဘာတွေ ပြောနေကြတာလဲ”
“ညီမလေး၊ ဒန် နားပါစေ၊ သူ ခရီးရှည် သွားခဲ့ရတာ အိပ်ချင်ရောပေါ့”
ထိုညက ဒန် အိပ်မက်မက်သည်။ ဝံပုလွေ မျိုးနွယ်စု တစ်စုက ဤမြို့ရဲ့ လမ်းတွေ၊ အမှိုက်ပုံတွေကို သန့်ရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ် တဲ့။ သို့သော် ထူးခြားတာကတော့ ဝံပုလွေတွေမှာ ခရမ်းရောင် အမွေးတွေ ရှိကြတာပါပဲ။ ဒန်ရဲ့ အမေကတော့ အိပ်မက်တွေဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အရာတွေကို ပြချင်လို့လည်း မက်တတ်တယ် လို့ ပြောဖူးသည်။ သူ အိပ်ရာကနိုးပြီးနောက် အပြင်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကော်ဖီဆိုင် ထိုင်ရင်း သတင်းစာ တစ်စောင်တွေ့သဖြင့် ဖတ်လိုက်တော့ မျက်နှာဖုံးသတင်းက ဆက်တိုက်ဖြစ်နေသော လူသတ်မှုများ အကြောင်း။ ဆေးရောင်းသူများနှင့် သုံးစွဲသူများကိုသာ ရွေးပြီး သတ်သည် ဆိုသည့် အကြောင်း..။ ရဲများက အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ရှာရာ ခွေးကြီး တစ်ကောင် ရောက်ခဲ့သည့် သဲလွန်စမျိုး တွေ့ရသည့် အကြောင်း… ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသတင်းကို နားမလည်နိုင်သဖြင့် မနေ့ညက ဘာတွေဖြစ်သလဲ ဆိုတာ ရမ်ဒီကို သွားမေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူ ပြန်လာတော့ သူတို့အားလုံး အိပ်နေကြဆဲ။ လိုရီကတော့ ဒန့်အခန်းထဲ ရောက်နေသည်။ သူမ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာ အညိုအမည်းစွဲနေသလို ဖြစ်နေသဖြင့် မနေ့ညက တိုက်ခိုက်ထားသလိုပင်။
“ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး၊ မနေ့ညက ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်လို့နေမှာပါ”
ဒန်သည် သတင်းစာထဲမှ ဆောင်းပါးကို သတိရသွားပြီး သူမကို မေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
“အဲဒါ ကျွန်မ ရှင့်ကို ပြောချင်နေတဲ့ အကြောင်းပဲ ဒန်၊ ကျွန်မတို့ အားလုံးဟာ လိုင်ကန်သရိုပီ တွေပဲ”
“အဲဒါ ရောဂါ တစ်ခုပဲ၊ အဲဒီ ရောဂါရှင်တွေဟာ ညဆိုရင် ဝံပုလွေ အဖြစ်ပြောင်းပြီး အစာရှာတတ်ကြတယ်လေ”
“မင်းတို့ အဲဒီ ဘဝကို ဘယ်လို ရခဲ့တာလဲ”
“လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်က အစ်ကို ရမ်ဒီ က မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ တွဲခဲ့တယ်လေ၊ အဲဒီမိန်းကလေးကလည်း သူ့ကို ချစ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီရောဂါကို ပေးခဲ့တာပဲ၊ သူကလည်း လိုလိုချင်ချင် လက်ခံခဲ့တယ်လေ၊ တိုတို ပြောရရင် သူမကို ဆေးသမားတွေ သတ်တာခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရမ်ဒီက သူမကို သတ်ခဲ့တဲ့ လမ်းပေါ်က ဆေးသမားတွေကို ရှင်းပစ်ဖို့ တာဝန်ကို သူ့ဟာသူ ယူခဲ့တာပဲ”
“ဒါပေမယ့် ကျွန်မ စဉ်းစားလို့ မရတာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်၊ သူမကို ပစ်ခဲ့တဲ့ ကျည်ဆံဟာ ရိုးရိုးကျည်ဆံပဲ ရှင့်၊ တကယ်လို့ ဝံပုလွေလူသားအစစ်ဆိုရင် ငွေကျည်ဆံနဲ့မှပဲ သတ်လို့ရတယ်လေ”
လိုရီက ဝမ်းနည်း၊ နာကျင်နေဟန် ပေါက်နေသဖြင့် ဒန်က သူ့အခန်းမှာပဲ တစ်နေ့လုံး အိပ်နေစေလိုက်သည်။ ထိုနေ့ တစ်နေ့လုံး ကျန်သူများကလည်း အိပ်ပျော်နေကြသဖြင့် သူ ထွက်ခွာသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ စာတစ်စောင် ရေးထားခဲ့ပြီး သူထွက်လာခဲ့သည်။
သူ တစ်နေ့လုံး လမ်းလျှောက်နေခဲ့သည်။ ညရောက်တော့ လုံခြုံမည် ထင်ရသည့် တစ်နေရာမှာ အိပ်ဖို့ပြင်သည်။ ထိုနေရာမှာ ကျောက်တုံးများဖြင့် ပြည့်နေပြီး ကြောက်လန့်စရာ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပဲ ငြိမ်းချမ်းသောနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် သူအိပ်ပျော်သွားသည်။ မနက်နိုးလာတော့မှ ထိုနေရာမှာ သင်္ချီုင်းတစ်ခု ဖြစ်မှန်းသိရသည်။
သူ လမ်းစလျှောက်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့လုံး… မြန်မြန် လျှောက်တဲ့အခါလျှောက်၊ နှေးနှေး လျှောက်တဲ့အခါလျှောက်။ အဲလိုနှင့် ညရောက်လာတော့ သူ့ကို ရဲိုရဲမှူးတစ်ယောက်က တားသည်။ သူ့ကို လက်မြှောက်ခိုင်းပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှာဖို့ပြင်သည်။ သူ့ခါးပတ်ထဲမှာ ထိုးထားသော သေနတ်ကို ဒန် သတိရလိုက်သည်။ ရဲိုရဲမှူးက သူ့သေနတ်ကို ထုတ်ပြီး ချိန်ထားပြီးနေပြီ။ အဲဒီနောက် အမှောင်ထဲမှ ဝံပုလွေများ ထွက်လာပြီး ရဲိုရဲမှူးကို တိုက်ခိုက်၍ လည်မျိုကို ကိုက်ခဲသွားသည်။ “အခုတော့ ငါတို့ ကယ်တဲ့ အလှည့်ပေါ့” ဝံပုလွေခေါင်းဆောင်က ဒန့်ကိုပြောသည်။ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတစ်ခု။ “မင်း ငါတို့ကို လိုတဲ့အခါ ပြောနော်..၊ ငါတို့ကို ဘယ်နေရာမှာ ရှာရမယ် ဆိုတာ မင်းသိပြီးသားပဲ” သူက ပြောပြီး ညအမှောင်ထဲသို့ ဝင်ရောက် ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဒန် ထိုညက ကောင်းကောင်း မအိပ်တော့ပဲ ဆက်လျှောက်နေခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့မှာ ဘုရားကျောင်း တစ်ခု ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်ရင်း သတိလစ်သလို ဖြစ်သွားသည်။ သူနိုးလာတော့ လဲလျောင်းလျက်နှင့် မျက်နှာကျက်တစ်ခုကို မြင်လိုက်သည်။ အသက်ကြီးကြီး နီဂရိုးအမျိုးသမီးကြီးက သူ့ကို ကြည့်နေတာကိုလည်း တွေ့ရသည်။ သူမ၏ ဆံပင်များမှာ ဖြူစပြုနေပြီ။ “မင်း အသက်ရှင်နေသေးတာ ဝမ်းသာစရာပဲကွယ်၊ ငါက မင်းနိုးမလာတော့ဘူးလို့တောင် ထင်နေတာ”
“ဒါက အရေးမကြီးပါဘူးကွယ်.. မင်းနေကောင်းရင် ပြီးတာပဲ”
အခန်းက သိပ်မကြီးမားပါ။ အခန်းတစ်ခုလုံး အကျယ်ကပင် ပေ ၂၀ ပေ ၃၀ လောက်ပဲ ရှိသည်။ တီဗွီ တစ်လုံးကို အခန်းထောင့်တွင် တွေ့ရပြီး နံရံတွင် ခရစ်တော်ပုံကို ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ဒီနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ ဖြစ်ဟန်တူသည်။ အမျိုးသမီးကြီးက ဘုရားကျောင်း တက်မည့် အဝတ်အစားမျိုး ဝတ်ထားသည်။
“မင် နိုးနေနဲ့မှတော့ အန်တီနဲ့ အတူ ဘုရားကျောင်းကို လိုက်ခဲ့ပါလား”
“မဖြစ်ဘူးထင်တယ် အန်တီ၊ ကျွန်တော့် အဝတ်အစားတွေကလည်း…”
“ဘာအဝတ်အစားပဲဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ဖို့သာ အဓိကပါ”
ဒန်သည် အမျိုးသမီးကြီးနှင့်အတူ ဘုရားကျောင်းကို သွားဖို့ရာ သံသယဖြစ်နေသည်။ သူ အဲဒီကို မရောက်ဖြစ်တာ ကြာခဲ့ပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ လမ်းကို ဖြတ်ကူးပြီး ဘုရားကျောင်းကို သွားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ပြီးနောက် အမျိုးသမီးကြီးကို ကျေးဇူးတင်လာသည်။
နောက်နှစ်မှာလည်း သူသည် တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ ပြောင်းကာ အလုပ်အမျိုးမျိုးလုပ်ရင်း နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် လိုအပ်သလောက်လေးသာ သုံးပြီး ပိုက်ဆံစုခဲ့သည်။ သူ့အတွက် လမ်းပေါ်မှာ နေရသည့် အချိန်ကများနေပြီး သူ ပထမဆုံး ထွက်ခွာခဲ့ရသည့် အိမ်ကိုမူ မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပင် ဖြစ်နေပြီ။ နေ့တိုင်းပင် သူနေထိုင် ကြီးပြင်းခဲ့ရာ အိမ်ကို သတိရနေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ အိမ်ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဒန် အိမ်ပြန်လာရာ လမ်းမှာ နိဗ္ဗာန်ဘုံ ဟုခေါ်သော မြို့လေးတစ်မြို့ကို ရောက်လာသည်။ မြို့လည်မှာ အသုဘ အခမ်းအနား တစ်ခုကို သူတွေ့ရသည်။ သေသူမှာ ကျော်ကြားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ရမည်။ မြို့ထဲက လူတိုင်း သွားနေကြပြီး ဆိုင်များကိုပင် ပိတ်ထားကြသည်။ ဒန်က သူ့ကို လူခပ်များများ မြင်မှာ မလိုလားသဖြင့် ထိုနေရာသို့ မသွားပဲ ဆက်လျှောက်လာခဲ့ရာ ရေကန်လေး တစ်ခုနားသို့ ရောက်လာသည်။ ရေကန်၏ တစ်ဘက်မှာ အညိုရောင် ဆံပင်နှင့် မိန်းကလေးငယ် တစ်ယောက် ရပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူမသည် ၁၃ နှစ်လောက်သာ ရှိဦးမည်ဖြစ်ပြီး ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်နေပုံရသည်။ ဒန်က သူမကို သွားပြီး စကားပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူရောက်သွားတော့ သူမက ကျောက်တုံးတစ်ခု ပေါ်မှာ ထိုင်နေပြီး ရေထဲကို ကြည့်နေသည်။ သူမနားသို့ တစ်ယောက်ယောက် ရောက်လာတာကိုလည်း ဂရုမစိုက်။ ဒန်က သူမနား ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ထိုင်ပြီး စကား စပြောလိုက်သည်။ ထိုအခါကျမှ မိန်းကလေးက သူ့ကို သတိထားမိသွားသည်။
“မင်း ဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ အသုဘကို မသွားဘူးလာဲး” ဒန်ကပြုံးပြီး မေးလိုက်သည်။
“လူတိုင်း သွားနေကြတာတွေ့လို့ပါ၊ တကယ်တော့ ဘယ်သူသေမှန်းတောင် ငါမသိဘူး”
“ရှင်က ဒီနားတဝိုက်က မဟုတ်ဘူးထင်တယ်”
သူမ အသံလေးက မယုံနိုင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ချိုသာသည်။
“မြို့ဝန်လား..၊ အမတ်လား.. တစ်ယောက်ယောက်ပဲ ဖြစ်ရမယ်”
“မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်မ အဖေပါ”
“အိုး.. ဒါဆို မင်းက ဘာလို့ အသုဘအခမ်းအနားမှာ မရှိပဲနဲ့ ဒီနားကို ရောက်နေရတာလဲ၊ တစ်မြို့လုံးကတော့ မင်းအဖေကို ချစ်ကြပုံ ပေါ်တယ်နော်”
ဒန်က သူ့ အသံကို ဒေါသသံမပါအောင် မနည်းနှိမ့်၍ ပြောရသည်။
“ကျွန်မလည်း သူ့ကို ချစ်ပါတယ်၊ အဖေ ဆုံးသွားလို့ ဝမ်းနည်းတာပေါ့”
ဒန် သူမကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရသည်။
သူ့အဖေကတော့ သူ့အလုပ်ကို အကြောင်းပြပြီး သူ့အမေကို ထားသွားခဲ့သည်။ သူက သူ့အဖေကို အမြဲတမ်း မုန်းနေခဲ့သည်။ တစ်နေ့နေ့ သူ့အဖေကို ပြန်တွေ့ခဲ့လျှင် သေချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မေးဖို့ တွေးထားခဲ့သည်။
ဒန်က မိန်းကလေး ကို ပခုံးကို ဖက်၍ နှစ်သိမ့်လိုက်သည်။ သူတို့ မိနစ် အနည်းငယ်လောက် ဆက်နေကြပြီးနောက် သူမက သူမအဖေ၏ အုတ်ဂူကို သွားကြည့်ချင်လာသည်။
“ငါလည်း မင်းနဲ့ အတူ လိုက်ခဲ့မယ်လေ”
ဒန်နှင့် သူမ ဘေးချင်းယှဉ်လျက် လျှောက်လာခဲ့ကြသည်။
“ငါက လက်ဇင်တန် က အိမ်ကို ပြန်မလို့လေ”
သူမက သူလိမ်နေသည် ဟု မထင်ဖို့ မျှော်လင့်သည်။
“ဒီမှာ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်တစ်ခု ရှိတယ်လေ၊ ရှင် လမ်းလျှောက်သွားမယ့် အစား ဘတ်စ်ကား မှီအောင် စောင့်စီးသွားပေါ့”
“ငါ လမ်းလျှောက်လာမှန်း မင်းဘယ်လိုလုပ် သိတာလဲ”
“ရှင့် ကျောပိုးအိတ်က ညစ်ပတ်နေတယ်လေ၊ အဲဒီ ဘတ်စ်ကားက ငါးနာရီလောက် လာမယ်ထင်တယ်”
သူတို့ သချိုံင်းကို ရောက်သည်အထိ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နှင့် မြို့ကို ဖြတ်လျှောက်လာခဲ့သည်။ ရှင်းလင်း သပ်ရပ်သော အုတ်ဂူများနှင့် အေးချမ်းသော နေရာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဝင်ပေါက်ဝက ကျောက်တိုင်ကြီးကတော့ အိုမင်းနေမှန်း သိသာသည်။ မြက်ရိုင်းများက နွေဦးအစောပိုင်းမို့ အစိမ်းရောင်သမ်းကာ လှပနေဆဲ။ အစွန်နားမှာတော့ မိုးမခပင် တစ်ပင်ရှိသည်။
ဒန်က မိန်းကလေးနောက်က လိုက်လာရင်း ဂူသချိုံင်းများကို ကြည့်လာသည်။ သူမက အုတ်ဂူ တစ်ခု ရှေ့မှာ ထိုင်လိုက်ပြီးနောက် မျက်ရည်များ ကျလာသည်။ သူမ ငိုနေတာကို ဒန်မကြည့်ရက်ပါ။ သူက မိုးမခပင် အကျော်လောက်အထိ လမ်းလျှောက်သွားပြီး ထိုနေရာရှိ အုတ်ဂူပေါ်မှ နာမည်ကို ဖတ်ကြည့်မိသည်။ ဒန်နီ ဝေါ့ကာ စီနီယာ၊ ခင်ပွန်းကောင်း၊ ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက်.. ဤနေရာတွင် လဲလျောင်းနေသည် ဟု ရေးထိုးထားသည်။
ဒန် မယုံကြည်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားသည်။ သူ့ဖခင် ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာနိုင်တာ ဒါကြောင့်ပဲလား။ သူ ရူးမတတ် ခံစားလိုက်ရသည်။ သူက အထင်အမြင်မှားပြီး သူ့အဖေကို အမြဲတမ်း အပြစ်တင်နေခဲ့သည်။ သူ ထိုအရှေ့မှာ မိနစ် အနည်းငယ်လောက် ရပ်နေမိသည်။
မိန်းကလေးက ဒန့်ဆီသို့ လျှောက်လာသည်။
“ရှင် သူ့ကို သိလို့လား”
“ငါ သိတယ်လို့ ထင်တာပဲ၊ သူ ဘယ်သူလဲ မင်းသိလား”
“သူက ကျွန်မ အဖေနဲ့ အတူတူ လုပ်ခဲ့တဲ့ ရဲိုရဲမှူး တစ်ယောက်ပါ၊ သူက တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျွန်မအဖေ အတွက်နဲ့ သေနတ် ပစ်ခံခဲ့ရတယ်လေ”
“ငါ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါမသိခဲ့ဘူး”
သူက မိန်းကလေးကိုသာမက အုတ်ဂူထဲက သူ့ကိုပါ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကံမကောင်းချင်တော့ သူ နည်းနည်းလောက်လေး နောက်ကျသွားတယ်လေ၊ ကျွန်မ အဖေလည်း ခေါင်းကို မှန်ပြီး ချက်ချင်း သေသွားခဲ့တာ”
သူမက ထပ်ငိုပြန်သည်။ နောက်မှ မျက်ရည်များကို လက်နှင့် သုတ်လိုက်သည်။
ဒန်က သူမကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေသွားစေချင်သည်။ သူမနှင့် လမ်းခွဲပြီးနောက် သူ ဘတ်စ်ကားဂိတ်သို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့လာသည်။ ကားလက်မှတ်ဝယ်ပြီး သူ စောင့်နေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘတ်စ်ကား ဆိုက်လာပြီး သူ တက်လိုက်ခဲ့သည်။ နောက်ဘက်နားမှာ နေရာရသည်။ ထိုင်ခုံက သက်တောင့်သက်သာ ရှိသောကြောင့် သူ ချက်ချင်းလိုပင် အိပ်ပျော်သွားသည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်တာ အတွင်း အိပ်အကောင်းဆုံး ညလို့တောင် ထင်ရသည်။
ဘတ်စ်ကား ဒရိုင်ဘာက နောက်ဆုံးမှတ်တိုင် ရောက်ပြီ ဆိုပြီး သူ့ကို နှိုးမှ သူနိုးလာသည်။ ဒန် ကားပေါ်မှ ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်လာခဲ့သည်။ သူ ထွက်သွားခဲ့သော နှစ်နှစ် အတွင်း မြို့က ဘာမှာ သိပ်မပြောင်းလဲသေးပါ။ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ သွားလာနေကြသည်။ သူ့ကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်၊ သူ့ကို မှတ်မိသူလည်း ဘယ်သူမှ မရှိ။ အနောက်ဘက်က မြင်းစီးကျောက်ရုပ်ကလည်း အရင်အတိုင်း..။ အရုပ် ပတ်ဝန်းကျင်မှ မြက်များကို လောလောလတ်လတ် ညှိဖြတ်ထားသဖြင့် မြက်စိမ်းနံများပင် ရနေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး အိမ်တော်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ နာရီကြီးက ၁၀ နာရီ ထိုးနေသည်ကို မြင်လိုက်ရသည်။ “ငါတော့ အိမ်ကို နေ့လည်စာ အမီ ပြန်ရောက်မှာပဲ၊ အမေတော့ စိတ်ဆိုးနေမလား မသိဘူး” သူက တွေးနေသည်။
သူ့အိမ်သို့ သွားရာလမ်းကို သူ ကောင်းကောင်းသိပါသည်။ နောက်ထပ် နှစ်နာရီလောက် လျှောက်လျှင်တော့ ရောက်တော့မည်။ သူက ပိုပြီး မြန်မြန် လျှောက်ချင်စိတ် ဖြစ်မိသည်။ မြို့လည်ကိုလွန်လာတော့ ၁၉၉၀ မော်ဒယ်လ် ကားလေးတစ်စီးက သူ့နံဘေးသို့ ရောက်လာသည်။ ကားထဲမှ မိန်းကလေးက သူ့ကို ရင်းနှီးသည့်ပုံနှင့် ကားထဲသို့ ဝင်ခိုင်းသည်။ ဒန် ထိုမိန်းကလေးကို ကောင်းကောင်း မှတ်မိသွားသည်။ သူ့အမေ အပြင် နောက်ထပ် သူအယုံကြည်ဆုံးသူပင်။ သူ ကားထဲဝင်ထိုင်ပြီးနောက် ရင်းနှီးနေသော အနံအသက်ကို ရသည်။ လေထဲမှာ ပျံနေသော စီးကရက်နံ။ ဒန် စီးကရက် မသောက်ဖြစ်တာ ကြာခဲ့ပြီ။ မိန်းကလေးက သူ့ကို တစ်လိပ်ပေးသည်။ သူမမှာ ရွှေညိုရောင် ဆံပင်တွေ ရှိပြီး သူ့အနားမှာ နေတိုင်း အမြဲတမ်း ပြုံးနေတတ်သည်။ သူကလည်း သူမအနားမှာ နေရတာကို အမြဲတမ်း သဘောကျခဲ့သည်။ ဂျင်းန် သည် ဒန် ဒုက္ခရောက်တဲ့ အခါတိုင်း အမြဲကူညီတတ်ခဲ့သည်။
ဂျင်မီ အသတ်ခံရပြီးနောက် သူရူးမသွားခဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မသေဖြစ်ခဲ့သည်မှာ သူမကြောင့်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ ဂျင်မီ သည် ဂျင်းန်၏ အမြွှာအစ်ကို ဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် တော်တော် ချစ်ခင်ခဲ့ကြသည်။ ဂျင်းန်က ဒန် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပို၍ တည်ငြိမ်သည်။ ဒန် ဘာကြောင့် တစ်နှစ်ကျော်ကျော် ပျောက်နေခဲ့သည်ကို သူမ သိသည်။ သို့သော် ဒီနေ့သူပြန်လာမယ် ဆိုတာ သူမ ဘယ်လိုလုပ်သိသလဲ ဆိုတာ ဒန်သိချင်သည်။
“ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာလိုက်တာ ဒန်နီ၊ ငါ နင့်ကို လွမ်းနေတာ”
“ငါလည်း နင့်ကို သတိရပါတယ်”
“နင် သေသွားပြီလို့ ထင်ကြပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ရဲတွေက ကျောင်းကိုလည်း ခဏခဏ လာမေးကြသေးတယ်”
“သူတို့က ငါမသေဘူးလို့ ထင်ကြတာလား”
“သူတို့က အဲလိုတော့ မပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့် နင့်ကို ရှာနေတာပဲ၊ နင် မြင်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်အကြောင်းကို သိဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ”
“ငါ့ကို အရင်အမေးခံရတာပဲ.. ငါကတော့ နင် မသေသေးမှန်းသိပါတယ်၊ သေနေတဲ့ အလောင်းက နင်နဲ့မှ မတူပဲ”
“နင် သူတို့ကို ငါ့အကြောင်း ပြောလိုက်သေးလား”
“သိပ်များများတော့ မပြောပါဘူး၊ ငါ့အစ်ကို နင့်ကြောင့် သေခဲ့ရလို့ နင့်ကို မုန်းနေတယ်” လို့ပြောလိုက်တယ်။
ထိုစကားက လိမ်ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒန်ကိုတော့ နာကျင်စေသည်။ ဂျင်းန်၏လက်မောင်း ပေါ်တွင် ဂျင်မီ သေသွားသည့် မြင်ကွင်းက သူတို့နှစ်ယောက်လုံး၏ မှတ်ဥာဏ်မှာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လိုပင် မှတ်မိနေဆဲ။ ထိုကိစ္စက လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်က ဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နင့်အမေကိုလည်း လာမေးကြသေးတယ်၊ နင့်အမေ ဆုံးသွားတော့ သူတို့ စိတ်ပျက်သွားတယ်၊ ဒါတောင်မှ နင့်အမေရဲ့ အုတ်ဂူကို သွားသွားချောင်းကြသေးတယ်၊ နင်များ ပြန်လာမလားလို့လေ”
“အဲဒီတော့ ငါမသေသေးတာ လူတိုင်း သိတယ်ပေါ့”
“အဲလိုတော့ မဟုတ်ဘူး၊ တစ်ခြားလူတွေကိုတော့ နင်မသေဘူးဆိုတာ ရဲတွေက မပြောဘူးလေ”
“ရဲမှူးကို ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကို ခေါင်းဆောင်ဖို့ နင်အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား”
“ငါ အခုတော့ လုပ်နိုင်မယ်လို့ သိပ်မထင်ဘူး”
“ဒီမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က လူသစ်တွေ ရောက်လာတယ်၊ အာလုံးပေါင်း ခုနစ်ယောက်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဝံပုလွေအဖွဲ့ လို့ခေါ်ကြတယ်၊ သူတို့ခေါင်းဆောင်က ခရမ်းရောင် ဆံပင်နဲ့လူပဲ”
ထိုအချက်များက ဒန်တွေ့ခဲ့သော အဖွဲ့ကို သတိရစေသည်။ သူတို့ဆီ သူ့ကို ခေါ်သွားဖို့ ပြောတော့ သူမကလည်း သူတို့ကို ဘယ်မှာ ရှာရမှန်းမသိပါ။ သူတို့ကို တွေ့ချင်လျှင် စောင့်နေဖို့ပဲ ရှိတော့သည်။
ထိုညမှာ ဝံပုလွေ အဖွဲ့က ဂျင်းန် ၏ အိမ်ကို လာသည်။ သူတို့သည် ပိတ်မထားသော နောက်ဖေးပေါက်မှ ဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာတော့ ဂျင်းန်က သူမဧည့်သည် အတွက် ညနေစာ ချက်နေသည်။
ဒန်ကို မြင်တော့ ရမ်ဒီက သူ့မျက်စိကိုတောင် မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်သွားသည်။
“ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ပဲ၊ ခင်ဗျား ညီမရော မပါဘူးလား”
“ဘာ၊ သူသေသွားပြီ ဟုတ်လား၊ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ”
ဒန်က သူကြားလိုက်ရသော စကားကို မယုံချင်။
“မင်း ထွက်သွားပြီးတော့ ရဲတွေ မင်းကို ရှာကြတယ်လေ၊ သူတို့က ငါတို့ မြေအောက်ကမ္ဘာကိုတောင် ရောက်တော့မတတ်ပဲ၊ ငါတို့ အားလုံးလည်း သူတို့ကို ပြန်တိုက်ကြတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့က အရမ်းများတော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူး၊ လိုရီကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်”
ဒန်က အခုထိပင် မယုံနိုင်သေး။ သူ့အတွက် အကြီးအကျယ် စိတ်ထိခိုက်စရာ ဖြစ်သွားသည်။ သူ့လက်ချောင်းများ အေးစက်လာသလို သူ့မျက်နှာကလည်း စက္ကူဖြူလို ဖြစ်သွားသည်။ ဂျင်မီ သေတုန်းက ခံစားမှုမျိုး သူ ခံစားလိုက်ရသည်။ ဂျင်မီ ရန်ပွဲမှာ သေတုန်းက သူအကူအညီမဲ့ ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်ရသော ခံစားချက်က မနေ့တစ်နေ့ကလို အမှတ်ရသွားသည်။ သူ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြေးသွားလိုက်ရသည်။ သူ့သွေးတွေ ပွက်ပွက်ဆူ သွားသလိုပင်။ ရေအေးအေးနှင့် မျက်နှာသစ်ပြီးမှာ သူစိတ်ကို အနည်းငယ် ထိန်းနိုင်လာသည်။ သူ မီးဖိုချောင်ထဲ ပြန်လာခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူတူ ညစာစားသွားပါလား ရမ်ဒီ”
ညစာစားပြီးနောက် မြို့နယ်ရဲမှူးကို တိုက်ခိုက်ဖို့ တိုင်ပင်ကြသည်။ ရမ်ဒီက သူ့အတွေ့အကြုံများကို ပြောပြသည်။
ရမ်ဒီ ပြန်သွားပြီးနောက် ဒန်က မေးသည်။
“ငါ ဒီည ဘယ်မှာ အိပ်ရမလဲ”
“ငါနဲ့ပဲ အတူ လာအိပ်ပါ”
သူမ ဆိုလိုတာက အိပ်ရာက တစ်ခုတည်း ရှိသောကြောင့် အတူလာအိပ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒန် အရင်က ဘယ်လို ဆိုးဝါးသော နေရာတွေမှာ အိပ်ခဲ့ရပါစေ အခုတော့ သူ့ကို ကုလားထိုင်ပေါ်မှာတော့ မအိပ်စေချင်ပါ။
သူမက ဒန့်ကို တစ်လျှောက်လုံး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ချစ်ခဲ့သည်။ သူမ ချစ်သည့်အကြောင်းကို ဒန့်ကိုတော့ တစ်ခါမှ မပြောခဲ့ဖူး။ သူ့အသံကိုသာ ကြားနေနိုင်မည်ဆိုလျှင် ဘယ်လိုနေရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူမက နောက်ကလိုက်နေချင်ပါသည်။
နောက်တစ်နေ့ နေ့လည်မှာ သူ ရမ်ဒီတို့နှင့် တွေ့သည်။ ရဲတွေက သူတို့ကို ရှာဖို့ ဘယ်တော့မှ စဉ်းစားမှာ မဟုတ်သည့် လျှို့ဝှက်နေရာ တစ်နေရာမှာ ဖြစ်သည်။ အခြား ဂိုဏ်းက လူများလည်း ရောက်လာကြသည်။ သူတို့ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ တိုက်ခိုက်တာကို ရပ်ခဲ့တာ ကြာပြီ။ အားလုံးပူးပေါင်း၍ ရဲများကို တိုက်ခိုက်လာတာ ဒန် မြို့က ထွက်သွားပြီးသည့် အချိန်လောက် ကတည်းကပင်။ အခု သူတို့အားလုံး ဝံပုလွေ အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံကြသည်။ ဒန်ကို တွေ့တော့ သူတို့က သူအသက်ရှင်နေပြီး သူတို့ ရှေ့ ရောက်နေသည်ကို မယုံကြည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေကြသည်။
“ကျွန်တော့်မှာ ရဲမှူး ရုံးပြင်ရောက်တာနဲ့ လုပ်ဖို့ အကြံ တစ်ခု ရှိတယ်”
သူတို့ အားလုံးက စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ကြသည်။ သူ့အကြံအတိုင်း လုပ်ဖို့ သဘောတူကြသည်။
မြို့လည်မှာ ထိုရဲမှူးကိုယ်တိုင် ကင်းလှည့်နေကျ နေရာ ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတဝိုက်မှာ သူတို့ အားလုံး စောင့်နေကြသည်။ ကင်းလှည့်ကား ဖြတ်လာသောအခါ ရပ်သွားအောင် ထောင်ချောက်ဆင်ထားကြသည်။ ရဲမှူးမှာ ထောင်ချောက်မိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ရဲမှူးက သူ့ကားထဲမှ ထွက်လာပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်သည်။ သူ့စိတ်ထဲတွင် ဒန်နှင့် သူ့လူတွေ ရှိနေသည် ဟု ခံစားရသည်။ တစ်ယောက်မှတော့ မမြင်ရသေး။ ဒန်က သူ့လူတွေကို အချက်ပြပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုရဲမှူးသည် ဒန့်ကို တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ ပြေးလွှားနေရအောင် လုပ်ခဲ့သောသူ။
ရဲမှူးကလည်း ဒန့်ကို မှတ်မိသွားသည်။ ကောင်ကလေး နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ ထိုကောင်လေးကို သူ အဆုံးသတ်ပေးချင်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီကောင်လေးကို ဖမ်းမိပြီဟု တွေးရင်းပြုံးသည်။
ဒန်က ထိုလူ အနီးသို့ ကပ်လာသည်။ တစ်ခြားလူတွေကလည်း ဝိုင်းထားသည်။ သူတို့ထဲမှ နှစ်ယောက်က ကားဆီသို့သွားပြီး ရေဒီယိုကို ဖြတ်လိုက်သည်။ ဒန်က သူ့ကို စထိုးပြီး လဲကျသွားအောင်လုပ်သည်။ သို့သော် သူကလည်း ခေသူမဟုတ်။ ဒန်လည်း တလှည့် မြေကြီးပေါ်လဲကျခဲ့ရသည်။ သူတို့ အကြိတ်အနယ် သတ်ပုတ်ကြသည်။ ရုတ်တရက် သူက ဒန့်ကို ကိုင်ပေါက်လိုက်သည်။ ဒန်လဲကျနေရာသို့ သွားပြီး အဆုံးသတ်ပေးရန်ပြင်သည်။ ထိုအခိုက်မှာပင် ဂျင်းန်က သူ့ကို ခုန်အုပ်လိုက်သည်။ သူက ဂျင်းန်ကို ဆွဲထားပြီး သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်ကာ သူမ ခေါင်းကို ချိန်ထားလိုက်သည်။ “ဘယ်သူမှ မလှုပ်နဲ့”
ဒန် ဒူးထောက်ပြီး ထလာသည်။
“နောက်ဆုတ် ကိုယ့်လူတို့၊ သူနောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး” ဒန်ကပြောလိုက်သည်။
ဒန့်အနေနှင့် သူမကို ဘာမှ မဖြစ်စေချင်ပါ။
“မှန်တာပေါ့ ကောင်လေး၊ မင်း နောက်လှည့်ပြီး လက်ကို ခေါင်းပေါ်တင်ထား”
ဒန်က သူပြောသည့်အတိုင်း လိုက်လုပ်သည်။ သေနတ်က သူ့နောက်ကျောကို ချိန်ထားသည်ဟု သူခံစားရသည်။
သူ ရပ်နေစဉ်မှာ အတွေးတွေ ဆက်တိုက်ပေါ်လာသည်။ လိုရီ ဘယ်လောက် ချစ်စရာကောင်းသည်ကို သတိရသည်။ သို့သော် ဂျင်းန်လောက်တော့ မလှဟု တွေးမိသည်။ သူ့ကို လမ်းမှာ အကူအညီ ပေးခဲ့သော အမျိုးသမီးကြီးကိုလည်း သတိရမိသည်။ နောက် နိဗ္ဗာန်ဘုံ ဆိုသော မြို့ကလေးမှာ တွေ့ခဲ့သော မိန်းကလေးကိုလည်း သတိရသွားသည်။ အဲဒီနောက် ဂျင်းန် အသံကို ကြားလိုက်ရပြီး ဝံပုလွေတစ်ကောင် မာန်ဖီသံနှင့် အတူ သေနတ်လွတ်ကျသွားသံ ကိုလည်း သူကြားလိုက်ရသည်။ အဲဒီနောက် သူ့ပခုံးမှာ နာကျင်မှုကို ခံစားလိုက်ရပြီး ဒန် မြေပေါ်လဲကျသွားသည်။
ဒန် နိုးလာသောအခါ သူအိပ်ရာပေါ်မှာ ရောက်နေပြီး ဂျင်းန်ကို ဘေးမှာ တွေ့ရသည်။ သူမ၏ ဆံပင်များမှ ချိုမွှေးသော အနံကိုပင် ရလာသလို…။ သူမက အိပ်နေတုန်းမှာပင် လှပနေသည်။ ပြတင်းပေါက်မှ ကျနေသော နေရောင်ပင် တော်တော်မြင့်နေပြီ။
“အကုန်လုံး အိပ်မက်ပဲ ဖြစ်ရမယ်” ဒန်က တီးတိုးရေရွတ်သည်။ ဂျင်းန် နိုးလာပြီး သူ့ကို ကြည့်သည်။
“နင့် ဒဏ်ရာ ဘယ်လိုနေသေးလဲ”
“ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကော မှတ်မိရဲ့လား၊ ဟိုလူက နင့်နောက်ကျောကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခဲ့တယ်လေ”
“တကယ်ပဲ အဲလို ဖြစ်ခဲ့တာလား”
“ဆရာဝန်ကတော့ နင်တော်တော် ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောတယ်”
ဒါတွေအားလုံးက အိပ်မက် မဟုတ်ခဲ့ပါလား..။ သူလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ သူတစ်ယောက်တည်း သွားခဲ့ရသော အချိန်တွေ…။ ထို့နောက် သူ ထိုရဲမှူးကို သတိရလာသည်။ သူ ရုံးမှာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်နိုင်သည်။
“ဘာလို့လဲ၊ နင် ဘယ်မှ သွားစရာ မလိုတော့ဘူး၊ အဲဒီလူလည်း ထောင်ထဲ ရောက်သွားပြီလေ”
“သူ နင့်ကို ပစ်ပြီးတော့ ရမ်ဒီက သူ့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လေ”
တီဗွီ ရိုက်ကူးရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ထိုနေရာမှာ ရှိနေခဲ့သည့်အကြောင်း..၊ ထိုအဖြစ်အပျက် တစ်ခုလုံးကို သူတို့ ရိုက်ယူထားလိုက်နိုင်သည့် အကြောင်း… ထိုရဲမှူးကို ရာထူးက ချထားလိုက်ပြီးနောက် သူလုပ်ခဲ့သော အမှုများ အတွက် ထောင်ကျတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း.. ဂျင်းန်က ဆက်ပြောသည်။
ဒန်က ဂျင်းန် ပြောသော ပုံပြင်ကို ထိုင် နားထောင်နေသည်။ ထို့နောက် ဂျင်းန်က သူ့နောက်ကျောမှ ဒဏ်ရာအတွက် ဆေးရုံမှာ တစ်ပတ်လောက် နေခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။ “တစ်လက်မလောက် ပိုသွားရင် အဲဒါက ရှင့်အသည်းကို ဖောက်သွားမှာ တဲ့”
ဒန်က ထလိုက်ပြီး ဂျင်းန်၏ အညိုရောင် မျက်လုံးများကို စိုက်ကြည့်ရင်း “ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်” ဟု ပြောလိုက်သည်။
Ref: The Hitch Hiker by Samhain
အပြောင်းအလဲ ကြိုက်တယ်လို့ ပြောပြောပြီး
ငွေရှာတာ ဝါသနာမပါဘူးလို့ ပြောရတာ
ဂုဏ်ယူစရာ မဟုတ်မှန်းလည်း သိရဲ့နဲ့
ဒီလိုပဲ ပြောရမလို ဖြစ်ဖြစ်နေတာ...။
အိပ်မက်ထဲက လမ်းကလည်း ဘယ်ဆီမှာမှန်းမသိ
(ကိုယ့်ဘဝကိုယ် မကျေနပ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာပါ။)